मानव इतिहासमा एउटै व्यक्तिको सही पथदर्शनले करोडौँ र अर्बौं जनताले समृद्धि, सुख र शान्ति पनि प्राप्त गरेको पाइन्छ । तर, इतिहासमा एकै व्यक्तिको गलत मार्गदर्शनले करोडौँ र अर्बौं जनताको मृत्यु, युद्ध आतंक, कोलाहल, रोग, भोक र शोकले असीमित र अवर्णनीय घटनाहरू पनि घटेको देख्न सकिन्छ ।
यस वर्षको मनसुन सामान्यभन्दा दस दिन ढिलो सुरु भयो । आर्थिक विकासको खाका वर्षभरिको बजेट प्रस्तुत भएको पाँच हप्ता अर्थात् असार २६ गतेपछि १० दिनको समयमा मनसुनकै कारण ठूलो प्रकोप मुलुकले सामना ग¥यो । बाढी पहिरोबाट रु. १ अर्ब २ करोड ७२ लाख ४५ हजार ५ सयको क्षति पुगेको सरकारी आँकडा छ । ३४ जिल्लामा १० दिनमा ९० जनाको मृत्यु भयो । राजधानी काठामाडौंमै ३ जनाको मृत्यु, ललितपुरमा ६ जनाको अवसान, मुलुकभरिको जनजीवन कष्टकर भयो । २९ जना बेपत्ता भए भने ४१ जना घाइते भए । ३१ जिल्लाका १३ हजार १ सय घरधुरी विस्थापित बन्न पुगे । समग्र कृषिक्षेत्र तहसनहस नै भयो ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको स्थान
पछिल्लो समय अमेरिका र इरानबीच बढेको द्वन्द्वका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सम्भावना पनि बढेको छ, जसका कारण नेपाली अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित हुने अर्थविद्हरूको अनुमान पनि छ । नेपाली अर्थतन्त्रको मूलआधार बनेको विप्रेषण वा रेमिट्यान्सको घट्नेक्रम दिनप्रतिदिन जारी छ । सन् २०२० जनवरी ३ मा इराकको कुर्दिस फोर्सका कमान्डर जनरल कासिम सुलेमानीसहित आठ जनाको अमेरिकी सैनिकद्वारा हत्या भएपछि बढेको द्वन्द्वका कारण विश्वका अधिकांश देश त्यसबाट उत्पन्न हुने नकारात्मक असरप्रति गम्भीर र थप चिन्तित बन्न पुगेका देखिन्छन्, जसका कारण विश्वका केही मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । सुलेमानीको आक्रमणपश्चात् इरानले जनवरी ८ मा इराकस्थित इरबिल र अल असदका दुई अमेरिकी सैन्य शिविरमा मिसाइल आक्रमण गरेपछि खाडी क्षेत्रमा झन् तनाव बढेको हो ।
मेयर र उपमेयरबीच कुरा नमिल्दा रौतहटको एक स्थानीय तहको नगरसभाको बन्दसत्र ओझेलमा परेको छ । प्रमुख र उपप्रमुखबीच रहेको विवादका कारण रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाको नगरसभा सम्पन्न भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि अझै हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि गत असारमै नगरसभा सम्पन्न भए पनि अझै बन्दसत्रको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । नगरपालिकाका मेयर धर्मेन्द्र पटेल र उपमेयर परनियादेवी पटेलबीच रहेको आरोपप्रत्यारोपका कारण बन्दसत्र ओझेलमा परेको देखिएको छ ।
पछिल्लो समयमा अमेरिका चीनबीचको सम्बन्धमा व्यापारयुद्धका कारण तनावको अवस्था सिर्जना भएको थियो । हुवावेले आपूmलाई विश्वकै ठूलो स्मार्टफोन कम्पनीको रूपमा उभ्याउने प्रयास गरिरहँदा अमेरिकाले उसको बाटोमा रोकावट पैदा गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यसैको प्रतिक्रियास्वरूप अमेरिकाको अनुरोधमा क्यानडाले मेङलाई पक्राउ गरेको थियो । हाल उनको प्रत्यर्पणका लागि क्यानडेली अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । चीनले यसको विरोध गरेको छ । यस मुद्दाले बेइजिङ क्रुद्ध भएको छ भने चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच प्रविधि युद्ध जारी रहेको संकेत गरेको छ । क्यानडाले सन् २०१८ मा अमेरिकाको अनुरोधमा हुवावेका संस्थापककी छोरी एवं हुवावेकी मुख्य वित्तीय अधिकारी मेङ वेनझाउको गिरफ्तारीले बेइजिङलाई चकित पारेको थियो ।
यो देशमा कृषि कति हेपिएको छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो उखुकिसानको आन्दोलन र आन्दोलनमा सरिक किसान रामविलास महतोको आँसु । गुलियो उखु उत्पादन गर्ने किसानको नुनिलो आँसुले यो देशको कृषिको वास्तविक अवस्था उजागर गरेको छ । उखु उत्पादन गर्छन् किसानले । त्यही उखु उधारोमा लिएर चिनी उत्पादन गर्छन् उद्योगीले । उत्पादन भएको चिनी बिक्री गरेर उद्योगीले नाफा पनि कमाउँछन् । किसानलाई भनेर सरकारले दिएको अनुदान कार्यविधि र अरू के–के विधि नपुगेको अथवा नमिलेको बहाना गरेर उनैले पचाउँछन् । तर किसानसँग उधारोमा लिएको उखुको भुक्तानी समयमा गर्दैनन् ।
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले विभिन्न नीति अवलम्बन गरे पनि दुर्घटना न्यूनीकरणमा कमी आएको छैन । पछिल्लो तीन वर्षयताको तथ्याङ्क हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सवारी दुर्घटना बढ्दो रूपमा रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गएको तीन वर्षमा सुदूरपश्चिममा दुर्घटना बढेसँगै मृत्यु हुनेको संख्यामा समेत बढोत्तरी देखिएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपालमा पूर्ण संघीयताको ढाँचा अवलम्बन गरी संविधानको धारा ५६ बमोजिम तीन तहका सरकार गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रमा संघीय सरकार, सातवटा प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरी सोको अधिकार, कर्तव्य र कार्य पद्धतिको समेत व्यवस्था नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको छ । यसैअनुरूप प्रदेश नं. २ को गठन भएको छ । यस प्रदेशमा तराईका ८ जिल्ला सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा रहेका छन् । यो पहाड र हिमाल नभएको एकमात्र प्रदेश हो भने यहाँका सबै जिल्लाले भारतसँगको सिमाना छोएका छन् ।
‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ सुरु भएको दुई हप्ता बितिसकेको छ । स्मरणीय छ, ‘नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२०’ को औपचारिक उद्घाटन सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले संयक्त रूपमा काठमाडौंस्थित दशरथ रंगशालामा भव्य रूपमा गर्नुभएको थियो ।
समृद्धिको गति तीव्र बनाउन निर्वाहमुखी कामबाट व्यावसायिकमुखी रोजगारतिर फड्को मार्नुको विकल्प छैन । समृद्धिको सपना साकार पार्न सर्वसुलभ व्यावसायिकमुखी शिक्षा पहिलो सर्त हो । मानवजीवनको चौतर्फी विकासका लागि जीवनोपयोगी शिक्षा अपरिहार्य हुन्छ । शिक्षाको प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिको अन्तरनिहित प्रतिभा प्रस्फुटन गराएर उत्कृष्टता हासिल गर्नेतर्फ उन्मुख गराउनु हो । सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रहनसहन, मूल्य–मान्यता, पहिचान र समायानुकूल परिमार्जन तथा परिष्कृत गर्र्दै जीवनशैलीमा उतार्न सक्षम सकरात्मक नागरिक शिक्षाले उत्पादन गर्नुपर्छ । शिक्षाले दैनिक जीवनमा आइपर्ने चुनौतीलाई सहज रूपमा सामना गर्न सक्ने सिर्जनात्मक एवं रचनात्मक प्रतिभाको विकास गर्न सक्नुपर्छ ।